warkii.com » Akshay Kumar oo la weydiiyay xiriirkii kala dhexeeyay Raveena Tandon iyo inay is guursadeen… (Waa tan jawaabtii uu bixiyay iyo qirashadiisa)
Akshay Kumar oo la weydiiyay xiriirkii kala dhexeeyay Raveena Tandon iyo inay is guursadeen… (Waa tan jawaabtii uu bixiyay iyo qirashadiisa)
Intii lagu gudo jiray sanadihii 90-maadkii, waxaa cinwaanno waaweyn sameeyay sheekadii jaceyl ee ka dhexeysay Akshay Kumar iyo Raveena Tandon.
Waxaa intaas sii dheeraa inay fahan badan ku muujinayeen shaashadda marka ay filim sameeyanayaan, waxaana lagu xasuustaa filimo ay ka mid yihiin Mohra, Khiladiyon Ka Khiladi, Barood iyo kuwo kale, waxaana daawadayaasha ay ahaayeen kuwa xiiseyn jiray inay labadan xiddig isku arkaan.
Balse waxaa mar qura is qabsaday xanta ah inay is guursadeen Raveen iyo Akki, balse xiriirkooda ayaa burburay, waxaana sanadkii 1998 Akshay la weydiiyay xiriirkoodii iyo inay is guursadeen.
Akki ayaa hillinka Rediff News u sheegay in kaliya ay isu doonnaayeen, balse aysan is guursan, dabadeena uu burburay xiriirkoodii haasaawaha.
“Kaliya waxay ahayd doonasho, taasoo ugu dambeyn burburtay. Iga raalli noqda, ma jirin wax guur ah” ayuu ku jawaabay Akshay.
Khiladi Kumar ayaa sidoo kale gaashaanka u daruuray inay si wacan isula shaqeyn waayeen isaga iyo Raveena kaddib markii ay kala hareen, waxaana uu tilmaamay inay sii wada shaqeynayeen iyagoo kala tagay.
Akki ayaa la weydiiyay in director Pramod Chakravorty uu dhib badan ka maray inuu filimkii Barood isugu keeno labada xiddig, waxaana uu ku jawaabay inay taasi been-abuur tahay, isagoo Raveena ku tilmaamay qof xirfadle sare ah, oo taqaana shaqadeeda.